NgoMatshi 2020-Funda ukuRhweba
Inyanga: Matshi 2020
I-XDEX yeBrazil yaseBrazil yoTshintshiselwano ngoTshintsho luShiye ukuSebenza
Ukuhlaziywa: 31 Matshi 2020
Utshintshiselwano nge-crypto ye-XDEX yaseBrazil, eqhutywa ngoyena mthengisi mkhulu weLatin America, ubhengeze ukuphela kokusebenza kwayo. Inkampani ixele ukuphela kwayo ngoMatshi 31:
“Namhlanje sixela ukuba iXDEX iqala inkqubo yokuphelisa ukusebenza kwayo. Uqikelelo lweemarike, ukhuphiswano, kunye notshintsho oluncinci kwezomthetho luthintele amathemba abonwe ekuqaleni kweprojekthi kwaye kukhokelele kuphuhliso lwesigqibo esinzima. ”
Ixesha elandisiweyo lokuValwa
Inkampani ibonelela ngokungafumaneki kokugcina kwii-cryptocurrensets, ke abaxumi banakho ukufikelela kwiintsuku ezingama-30 ukusukela kwimini yokwazisa ukuba baphume kwizikhundla zabo kwaye barhoxe ngokupheleleyo imali yabo kutshintshiselwano kwi-reais.
"Ekuqaliseni ukurhoxiswa komyalelo, imali ithunyelwa kwiakhawunti yebhanki echongwe ngeXDEX kwintsuku ezi-1 zomsebenzi, ngokusekwe kumaxwebhu ezemali," yaqukumbela ingxelo, igalelo:
"Emva kweentsuku ezingama-30, ngaphandle kokuba umthengi ukuza kuthi ga ngoku akayidluliseli iasethi, siza kwenza loo nto egameni lakhe kwaye sihambise imali efunyenwe kwintengiselwano kwiakhawunti yebhanki echongwe ngeXDEX ngaphezulu kweentsuku ezi-3 zokusebenza."
Ubuhlakani obulindelweyo abuphumelelanga
Iqale kwi-2018, i-XDEX iphindwe kabini ekungeneni kwabatyali mali beziko laseBrazil kwi-cryptocurrency, emva kokuba abachaphazelekayo be-XP Investimentos beseke inkampani. Omnye wabarhwebi abaphambili baseLatin America, i-XP Investimentos yongamela utyalomali oluxabisa iibhiliyoni.
Le iya kuba yinkampani yesine yokuthengisa iBitcoin ephelisa ukusebenza kwayo eBrazil. Iifemu zaseBrazil, iOmniTrade, iLatoex, kunye neAcesso Bitcoin baxele ukupheliswa kwemisebenzi ngaphambi kwayo. Ukanti elinye ishishini laseBrazil iBitcoin elibizwa ngokuba yiBitjá linike ingxelo yokuvalwa kwayo ekupheleni konyaka ophelileyo.
tags Brazil, Utshintshiselwano ngexabiso lemali, I-XDEX
I-Italiya 40 (ITA40) iyabuya kodwa ijongene nokuXhathisa okuQinisekileyo ngo-17566
I-Italiya 40 (ITA40) yexesha elide: Ukuthwala
I-Italiya 40 okwangoku isonyukela phezulu njengoko inkxaso ye-15000 ibambe. Ukunyuka okuphezulu ngoku kujongene nokuchasana ngo-17566. I-ITA40 iyakufikelela kuma-22000 aphezulu ukuba uxhathiso oluse-17566 lwaphuliwe. Isalathiso ngaphambili besikummandla ogqithileyo njengoko iinkunzi zeenkomo zivela zityhalela i-ITA40 phezulu.
I-Italiya i-40 ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Isalathiso sihlale ixesha elide kummandla ogqithileyo kodwa iinkunzi ziye zavela. I-SMA yeentsuku ezingama-21 isebenza ngokuchasene nesalathiso.
I-Italiya 40 (ITA40) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikwisiteshi esihla. Isalathiso sijamelene nolunye uxhathiso ngo-16648. Oku kusemva kokuba iinkunzi zeenkomo ziwaphule umgca wokumelana nomjelo ohla. Iinkunzi zeenkomo zenze iinzame ezintathu zokuchasa ngo-16648 ngaphandle kokophula. Kwicala elingaphezulu, ukuba iinkunzi zeenkomo ziyakwaphula ukuxhathisa okwangoku, isalathiso siya kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-19000.
I-Italiya i-40 okwangoku ikwinqanaba lama-53 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Oku kuthetha ukuba isalathiso sikummandla ophakamileyo. Isalathiso sinokunyuka njengoko singaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Kananjalo, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zitshibilika phezulu zibonisa uptrend.
I-Italiyane 40 okwangoku inyukela phezulu kodwa ijongene nokuchasana ngo-16648. Iinkunzi ziyavela kummandla ogqithileyo ukuxhasa inyathelo eliya phezulu.
Isixhobo: i-Italiya 40 (ITA40)
Ixabiso lokungena: 17001
tags Ite40, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-US Wall Street 30 (US30USD) eya phezulu inyusa ukujongana nenkcaso kwi-22576
Iindawo eziManyeneyo eziPhambili28500, 29000, 29500
Imimandla yenkxaso ephambili26000, 25500, 25000
I-US Wall Street 30 (US30USD) yeendlela zexesha elide: Bullish
Ukunyuka kwesalathiso kuyaqhubeka njengoko ixabiso lifikelela kwinqanaba eliphezulu lama-22576. Ekuphakameni kwe-22576, imarike ijongene nokuchasana okuthile. Ukuxhathisa okwangoku kuvavanyiwe ziinkunzi kodwa akukaphulwa. Kwicala elingaphezulu, ukuba iinkunzi zeenkomo ziyakwaphula ukuxhathisa okwangoku, ixabiso liya kufikelela kwinqanaba eliphezulu lama-26000.
US30USD-Itshathi yemihla ngemihla
Umndilili wokuhamba oluhlaza okwesibhakabhaka usebenza njengokumelana nesalathiso. I-US30USD ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Iinkunzi ziphuma kummandla ogqithileyo njengoko intengiso isonyukela phezulu.
I-US Wall Street 30 (US30USD) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bearish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-US30USD ikwisiteshi esihla. Iinkunzi zaqhekeka zavalwa ngaphezulu komgca oxhathisayo wejelo elehlayo. Ukunyuka okuphezulu kungoku kujongene nenkcaso kwi-22576. Iinkunzi zeenkomo zenze iinzame ezimbini ezingaphumelelanga zokuyaphula. I-US30USD ithengisa ngaphantsi koxinzelelo oluphezulu.
US30USD-4 Itshathi yeYure
Isalathiso sikwinqanaba lama-56 leNdawo yamandla esiNxulumeneyo sexesha leshumi elinesine. Oku kuthetha ukuba ixabiso likummandla ophakamileyo. Isalathiso singaphezulu komgangatho osembindini 14. Kukho i-crossover ekhuthazayo njengoko iintsuku ezingama-50 ze-SMA ziwela ngaphaya kwe-21-day SMA.
Imbonakalo Jikelele ye-US Wall Street 30 (US30USD)
Isalathiso se-US30USD sinokutshintsha kwendlela. Imakethi inyukela phezulu kodwa ngoku ijongene nenkcaso kwi-22576. Ngalo lonke ixesha iinkunzi zeenkomo zichasene, intengiso iya kuwa kwinkxaso ye-SMA yeentsuku ezingama-21. Isalathiso sikwi-bullish umfutho.
Isixhobo: I-US Wall Street 30 (US30USD)
Ixabiso lokungena: 22402.10
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, I-US30USD
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: Ixabiso likaBitcoin lihlala liphantsi kwe- $ 6900 kodwa abathengi basabonisa umdla.
• I-Bitcoin isabhekene nokuchasana okubalulekileyo malunga ne-6900 yeedola
• Ngelixa i-BTC ibambe inkxaso yexeshana kwi-5880 yeedola, isaphulelo kwi-6300 yeedola sinokubonelela ngokunyuka okutsha kwe-Bitcoin
I-Bitcoin ibonisa uphawu lwe-bullish kwiintsuku ezithile ngoku kodwa ukuxhathisa kwe- $ 6900 kuye kwaqhubeka nokuba sisisongelo kwiinkunzi. Nangona ivolumu yokurhweba ibuyela emarikeni. Nje ukuba iBitcoin isuse oku kuchasana, sinokulindela ukunyuka kwamaxabiso ukuya phezulu. Ngaphandle koko, i-BTC iya kuqhubeka nokulwa phantsi kolu xhathiso lubalulekileyo.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 6900, $ 7200, $ 7500
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 6000, $ 5677, $ 5200
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi ye-4H-engathath'icala
Ngaphandle kwe- $ 4000, ephantsi ngenyanga, iBitcoin iqhubile yakha inkxaso kwi- $ 4500, $ 5200 kunye ne- $ 5677 ngokwahlukeneyo. Izolo, iBitcoin ibuyise umva kwi- $ 5880 ukuya kwi-6600 yeedola emva kweentsuku ezintathu ithengisile ukusuka kwi- $ 6900. Ukuza kuthi ga ngoku, ixabiso liye lehla laya kwi-6377 yeedola njengoko iBitcoin ibonisa umqondiso wobuthathaka.
Itshati ye-BTCUSD, 4H-Matshi 31
Kumathontsi abalulekile, kukho inkxaso esondeleyo kwi- $ 6000. Ukulahla okungaphezulu kunokuthumela i-BTC kwindawo yokubuyela eluhlaza kwi-5677 yeedola. Inkxaso engezantsi kwale ndawo ikwi- $ 5200. Ngokuchaseneyo, i-Bitcoin inokuqalisa ukwanda okutsha ukuba abathengi banokoyisa ukunganyangeki kwe- $ 6900, ephawulwe bomvu kule tshathi ingentla. Emva koko, ukuxhathisa okungaphezulu kulindelwe kwi- $ 7200 kunye ne- $ 7500, ejikeleze umgca wokubuyela umva kwiorenji.
I-Bitcoin ngobuchwephesha kwezobuchwephesha kwitshathi yeyure, nangona ibone ubungqina obunamandla ngaphezulu kweeyure ezingama-24 zokugqibela. Ukulandela ukwaliwa kwakutshanje, ujikelezwe mthubi kumgca wokulungiswa kweorenji, iBitcoin kungenzeka ukuba yehle kakhulu kwiiyure ezimbalwa ezizayo. Njengoko sibona, ixabiso sele lihlile kufutshane nenkxaso ye- $ 6300 ethe yaphuka izolo.
I-BTCUSD, itshathi yeyure-Matshi 31
Ukuba eli nqanaba lenkxaso liphuka kakhulu, iBitcoin inokuqengqeleka iye kuthi ga kwi-6000 yeedola, apho indawo yesibini eluhlaza ilele khona. Inkxaso elandelayo apha yi- $ 5880, ephantsi izolo. Kwimeko apho iBitcoin ifumana inkxaso ejikeleze indawo ekufunwa kuyo eluhlaza, amaxabiso anokuphinda abuyele kwi-6600 yeedola, engaphezulu kancinci komgca weorenji. Ukuba uxhathiso lubambe njengenkxaso, okujolisiweyo okulandelayo kuya kuba yi- $ 6800 kunye ne- $ 6900.
KULINDWE UMYALELO WOKUTHENGWA
Thenga: $ 6300
I-TP: $ 6540
tags BTC, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-USDCHF yandisa ukuPhinda kweXesha ekuPhulukenwe nalo ukusuka kwiNqanaba kwi-0.9600 ukuya kwinqanaba le-0.9696
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-ngo-Matshi 31
I-USDCHF ibambe i-U-turn yosuku olungaphambili, yiyo loo nto izisa izangqa ukusuka kwinqanaba le-0.9600 ukuya kwinqanaba eliphakathi kwi-0.9696 ngaphambi kweseshoni yangoLwesibini yaseMelika. Nangona izolo isibini seFx sizinze ecaleni kodwa asikwazanga kusombulula izithintelo ezithile eziphawuliweyo, kwaye ke sihlala siethe-ethe.
Amanqanaba okumelana: 1.0231, 10027, 0.9902
Amanqanaba enkxaso: 0.9600, 0.9440, 0.9181
Ngaphakathi kwimeko ebanzi, ukuwa kwinqanaba le-1.0231 kujongwa njengomlenze wesithathu wendlela ukusuka kwinqanaba le-1.0342 (ephezulu). Xa sele ifikelele kwinqanaba eliphambili le-0.9242 (elisezantsi), bekufanele ukuba igqityiwe kwinqanaba le-0.9181.
Ukuzama kwakhona inqanaba eliphezulu le-1.0231 kunokubonwa njengenkqubela phambili eqhubekayo. Emva kwayo yonke loo nto, ukurhweba phakathi kwexesha eliphakathi ukuya kwelide kusenokwenzeka ukuba kuqhubeke kangangexesha elithile phakathi kwenqanaba le-0.9181 / 1.0231.
Phakathi kokuchacha ngoku, i-intraday bias kwi-USDCHF ithathwa njengengathathi cala. Kwicala elingaphezulu, ikhefu le-0.9696 yenqanaba elincinci lokumelana linokuthetha ukuba ukubuyela umva kwinqanaba le-0.9902 kugqityiwe.
Kwinqanaba elilandelayo le-0.9902, i-intraday bias inokutshintshwa ibuyele umva. Kwicala elisezantsi, ikhefu eliqhubekayo leepesenti ezingama-61.8 ukusuka kwi-0.9181 ukuya kwi-0.9902 kwinqanaba le-0.9440 linokuya kuvavanyo kwinqanaba lokuxhasa eliphambili le-0.9181.
Ixabiso lokungena: 0.9600
I-S & P 500 ehamba phambili elindelekileyo iyaqhubeka nokudibanisa amaNqanaba angama-2600/2700
I-S & P 500 idibanisa ukuqhubela phambili kweentsuku ezi-4 phantsi kwamanqanaba angama-2600/2700 ngelixa isoyikiso esikhulu nesinamandla sisaqhubeka, ukungaqiniseki kwihlabathi liphela kuhlala kwicala elibuthathaka ngexesha leseshoni yokuqala yangoMvulo. Ngokwenyani, ngokwabahlalutyi baseGoldman Sachs, balindele ngokufanelekileyo ukuba i-S & P 500 inyuke iye kumanqanaba angama-3000 xa kuphela unyaka.
Amanqanaba okumelana: 3139.0, 2900, 2700
Amanqanaba enkxaso: 2500, 2400, 2179.3
Njengoko kubonisiwe kwitshathi yemihla ngemihla, i-S & P 500 idibanisa ukuhamba kweentsuku ezi-4 phantsi kwamanqanaba oxhathiso angama-2600/2700. Kwixesha eliphakathi ukuya kwelide, ukubuyela umva kunokwanda ngezantsi ukuya kuma-2500 kunye nama-2400 amanqanaba. Ukuchasana okubonakalayo kubonisiwe kumanqanaba amaxabiso angama-2638/2700.
Eyona nto iphambili kukuba okona kunqabileyo kutsha nje kusenokwenzeka ukuba kubekhona ukuphinda kubekhona ngaphandle kokuba i-S & P 500 iyophula ngokufanelekileyo ngaphezulu kwenqanaba lama-2638.
Ngokuya kwinqanaba lexesha leyure ezi-4, i-S & P 500 ityhila ukuba isalathiso siphelise umjikelo wexesha elincinci xa intengiso ifikelela kwinqanaba le-3139, kwaye isalathiso sele sidibanisa kwinqanaba le-2638 ngokutyhala ngokuchasene ukuxhathisa kwayo.
Ngaphandle koko, intshukumo yokulungisa ixabiso eliyenzayo kufuneka iqhubeke nokutshintsha ukuthanda kwayo, okukhokelela kwirali ephezulu ukuya kwinqanaba lama-2700. icala elide ithuba lokudityaniswa okutsha.
Ixabiso lokungena: 2600.0
Ripple (XRP) Ukutyhala ngaphezulu kwe- $ 0.17, Ukuzama ukuya phezulu
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 0.30, $ 0.40, $ 0.45
Ukusukela nge-Matshi 12, iRipple ibikukunyuka kodwa ijongene nokuchasana ne- $ 0.17. Ixabiso sele litshintshile phakathi kwe- $ 0.12 kunye ne- $ 0.17. Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo ziqhekezile kwaye zavala ngaphezulu komgca wokumelana nomjelo ohla. Intshukumo yexabiso lithetha ukuba kunokubakho utshintsho kwimo. I-Ripple inokwenzeka ukuba inyukele phezulu. I-XRP inokwenzeka ukuba inyukele phezulu kwi-0.20 yeedola, ukuba iinkunzi zenkomo zigcina ixabiso ngaphezulu kwe-0.17 yeedola. Kukho utyekelo olunokwenzeka lokuba ixabiso lislide ngezantsi kwe- $ 0.17, ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukugcina ixabiso.
I-XRP / i-USD - Itshati yemihla ngemihla
I-Ripple ithengisa ngaphezulu kwe-60% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Umfutho we-bullish awuzinzanga njengoko iinkunzi zeenkomo zisaphula umgca wokumelana nomjelo owehlayo. Okwangoku, imivalo yamaxabiso ingaphezulu kwenkxaso yeentsuku ezingama-21 ze-SMA.
I-XRP / USD yeXesha eliPhakathi lokuHamba: Bullish
I-Ripple yenza uthotho lweendawo eziphakamileyo eziphezulu kunye nokuphakama okuphezulu. Iinkunzi ziye zakwazi ukophula ngaphezulu kwe- $ 0.17, kodwa iinkunzi kufuneka zigcine ukunyuka okuya phezulu. Ukuhamba ngokunyuka okuphezulu akuzange kube nomtsalane, kuba ayithengi kumanqanaba aphezulu.
I-XRP / USD-4 Itshathi yeYure
Umgca wendlela yokuqhubela phambili utsaliwe obonisa amanqanaba enkxaso yexabiso. Okwangoku, i-Ripple iyenyuka njengoko ifikelela kwinqanaba lama-53 lesalathiso samandla ahlobene. I-Ripple ingaphezulu komda osembindini we-50 ebonisa ukuba ikummandla we-Uptrend. Nangona kunjalo, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zijonge phezulu.
I-Ripple yaphule umgca wokumelana nomjelo owehlayo. I-XRP inethuba lokunyuka ukuya phezulu ukuba iinkunzi zeenkomo zigcina amandla akhoyo ngaphezulu kwe- $ 0.17. Ukungaphumeleli kweenkunzi zeenkomo ukunyusa ixabiso phezulu kuya kwenza ixabiso lihla.
Ixabiso lokungena: $ 0.171
Yeka: $ 0.165
Ithagethi: $ 0.191
Ukutshintshwa kweBitcoin okungapheliyo okuThunyelweyo kwiHuobi ene-125x
Ukuhlaziywa: 30 Matshi 2020
IHuobi, ebekwe eSingapore, kukutshintshiselana nge-crypto kutshanje ukwazisa ngokutshintsha okungapheliyo. Imveliso entsha iboniswa bukhoma kwi-Huobi DM, iqonga lokurhweba elivela kwinkampani.
Iikhontrakthi ezingaphelelwa lixesha njengeBitMex, ezaziwa ngcono njengee-swaps ezingapheliyo, ziya zisanda ngokuxhaphaka phakathi kweefemu zotshintshiselwano nge-crypto.
I-Binance kunye ne-OKEx yasungula ii-swaps ezingapheliyo kunyaka ophelileyo kwaye ngoku lixesha likaHuobi lokujoyina i-bandwagon.
I-Huobi DM ngoku ibonelela nge-crypto-derivatives kubandakanya ikamva leBitcoin ngeveki, ngeveki ezimbini, nangeentsuku zokuphelelwa yisivumelwano.
Iqonga ngoku libonelela ngokutshintsha okungapheliyo. Ezi zinto zivela zenza ukuba abathengisi bakwazi ukufikelela kwiBitcoin nangona bengayithenganga. Impahla iyafana nekhontrakthi yekamva exelisa ixabiso le-asethi kodwa ayinalo usuku lokupheliswa okanye ukubhatalwa. Amaqonga ahlala etshintshiselana ngentengiselwano phakathi kwabathengi nabathengisi rhoqo emva kweeyure ezisibhozo.
Ukutshintshwa okungapheliyo, ngokwe-Huobi DM, "yimveliso yesimanjemanje evumela abasebenzisi ukuba babambe umngcipheko ngokufanelekileyo kwaye bakhe amathuba otyalo-mali afunyenweyo kwiimeko zentengiso ezikhuphisanayo."
UCiara Sun, VP weSebe loShishino lweHlabathi kwiQela laseHuobi, ucacisile:
Ngelixa siqapheleyo mvanje, ukuhla kweemarike ezikhawulezileyo kunokuba nefuthe elikhulu kodwa okwethutyana kwimeko-bume yezemali ebanzi, ukanti ukungaqiniseki kuseyinto eqhelekileyo kwinkqubo yentengiso. Ukutshintsha okungapheliyo kunika enye indlela yabarhwebi yokunyusa ukuguquguquka kweemarike kunye nokwakha iarbitrage kwipotifoliyo yabo.
Ukutshintshwa okungapheliyo kwiHuobi eqiniswe ngeX125
Kukwanokwenzeka ukuba uHuobi ufunda ngendlela ezisebenza ngayo ezinye izinto zotshintshiselwano kwaye ngokwembono yakhe kusetyenziswa imigangatho yolu shishino. Inkqubo evelisiweyo, ngokomgaqo, yenza ukuba isixa semali esipheleleyo sisondele kufutshane ne-125, njengomzekelo weBinance. Oku kuthetha ukuba abarhwebi kufuneka baphakamise intlawulo yabo yokuqala yesikhundla ngamaxesha angama-125 ukuze bazuze umvuzo ozayo.
Nangona kunjalo, ukubakho kokulahleka kukhulu kakhulu, yiyo loo nto uninzi lwabahlalutyi belumkisa ukuba kuphela ngabatyali mali beziko kunye nabanezakhono abanokuvunyelwa ukuba bathathe ezi zixhobo.
Ngamanye amaxesha, ixabiso elinokubakho leBitMex kunye ne-OKEx yi-100x. Kude kube kuqala iBinance iveze isixa semali sayo, ubukhulu becala bekujongwa kwakhona.
U-Huobi uthi, nangona kunjalo, indlela ebonelela ngayo ngeempawu eziphambili zokunciphisa umngcipheko ukunciphisa umngcipheko, kunye nenkqubo yokupheliswa kwenxalenye kunye nomaphuli wesekethe. Ixesha langaphambili linciphisa kancinci indima yomthengi, endaweni yokuyiphelisa kwisiganeko esinye xa sisonke. Kwiimeko zentengiso ezingaqhelekanga, isaphulelo sokuyekisa isetyenzi sisetyenziswa xa inkqubo ichonga umahluko omkhulu ekucinyweni nasezimalini zentengiso.
Ukutshintshwa okungapheliyo bekukho kwi-ajenda yethu okwethutyana ngoku, nangona bekufuneka siqiniseke ukuba sinikezela ngomngcipheko owaneleyo wokukhangela kude kube siyibhengeze ukuba iyafikeleleka, wacaciswa nguLanga.
I-Huobi ekuqaleni yenza ukuba kutshintshwe i-BTC, kodwa ekugqibeleni iya kubonelela nge-ETH, i-EOS, kunye ne-LTC.
tags Ukutshintshana okungapheliyo kweBitcoin, Utshintsho lwe-Crypto, Cryptocurrency, Huobi
IJamani 30 (DE30EUR) iyabuya kodwa ijongene nokuQiniseka okuQinisekileyo kwi-10000
IJamani 30 (DE30EUR) yexesha elide iTrend: Bearish
IJamani i-30 iluphelisile uxinzelelo lokuthengisa kwisalathiso. Ukuhamba ezantsi kuye kwancipha njengoko imarike isenza ukunyuka okuphezulu. Iinkunzi zenza ukunyuka okuya phezulu njengoko imakethi ifikelela kuma 10000 aphezulu. Isalathiso ngoku sijamelene nokuchasana nge 10000. IJamani 30 ngaphambili yayikummandla othe kratya. Ukunyuka okukhoyo ngoku kubangelwe kukuvela kweenkunzi.
I-DE30EUR ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwi-bullish umfutho. Iinkunzi ziyavela zityhale isalathiso phezulu esasigqithisile ngaphambili. I-SMA yeentsuku ezingama-21 isebenza ngokuchasene nesalathiso.
IJamani 30 (DE30EUR) Ixesha eliphakathi kwiTrend: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikwisiteshi esihla. Inkxaso ye-8000 ibibanjiwe njengoko iinkunzi zeenkomo zisenyuka. Iinkunzi ziye zaphula umgca wokumelana nomjelo owehlayo kwaye ziqhubeke nokunyuka okuphezulu. Abathengi bafumana ubunzima bokungena kwi-10000 yokuxhathisa. Okwangoku, benze iinzame ezimbini ezingaphumelelanga ngaphandle kokophula.
Isalathiso okwangoku sikwinqanaba lama-53 le-Index ye-Relative Strength Index 14. I-RSI ibonisa ukuba i-DE30EUR ikummandla we-uptrend. Isalathiso siyenyuka. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ziye phezulu.
IJamani 30 index ibambe ngaphezulu kwamaxabiso ama-8000 amaxabiso. Ngokwaphula umgca wokumelana nejelo, imeko yangaphambili kuthathwa ukuba iyapheliswa. Kukho utshintsho kwindlela. Okwangoku iinkunzi zijongana nenkcaso kwi-10000.
Isixhobo: IJamani 30 (DE30EUR)
Ixabiso lokungena: 9653.20
tags DE30EUR, Uhlalutyo lwamaxabiso